सामाजिक मिडिया ब्लाइट | Martech Zone
सामाजिक मिडिया ब्लाइट
बुधबार, फेब्रुअरी 13, 2008 शनिबार, जून १,, २०१। Douglas Karr
मिडियाको फराकिलो पहुँचको पुरानो कहावत भनेको आँखाको गोलो = पैसा हो। त्रुटिपूर्ण तर्क जुन सामान्यतया आज स्वीकारिन्छ अझ बढी नेत्रगोलक = अझ बढी पैसा हामी सामाजिक मिडिया साइटहरू जस्तै हेर्दै छौं Digg, माइस्पेस र फेसबुक पठार र पनि भाग लिनुहोस्।
म विश्वस्त छु कि यी सबै साइटहरू पछाडि धकेल्नेछन् र तपाईंलाई भन्नेछन् कि उनीहरू बढ्दै छन् नेत्रगोल। त्यो वास्तवमै हो छैन राम्रो समाचार। यदि सहभागिता पठाइएको वा बुझेको छ र प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्दै छ भने, त्यहाँ गणितमा सन्देश छ! औसत प्रयोगकर्ताले कम समय खर्च गरिरहेको छ ... वा प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो संख्याले सेवा पूर्ण रूपमा छोड्दैछ।
विशाल बढ्ने प्रलोभन सधैं त्यहाँ रहन्छ ... अधिक नेत्रगोलनाहरूले अधिक पैसा ल्याउन सक्छ। यद्यपि अधिक आईबोलको दीर्घकालीन जोखिमले तपाईंको साइटको लोकप्रियता गाड्न सक्छ, वा यसलाई स्प्यामको लागि विशाल लक्ष्य बनाउन सक्छ। यी साइटहरू तिनीहरूको साइटको विकासको विश्लेषणका लागि विवेकी हुनुपर्दछ मौजूदा प्रयोगकर्ताहरूमा परेको प्रभाव विरूद्ध। यदि उनीहरूले त्यसो गरेको भए, तिनीहरूले यो बुझेको हुनुपर्छ कि अधिकतम नाफा कमाउनका लागि एउटा हो सही आकार उनीहरूको साइटमा विस्तारको लागि खोजीको तुलनामा विस्तार नगर्नुहोस्।
शहरी ब्लाइट = सोशल मीडिया ब्लिड
समस्या धेरै आधारभूत छ, यो शहरी blight। जब म फिनिक्स, एरिजोनामा एक बर्षको लागि बसिरहेको थिएँ मैले त्यहाँ भइरहेको सहरी उदासिनताको बारेमा धेरै पढें। S० को दशकको पछिल्लो समयमा, फिनिक्सको उपनगरहरू यस्तो मागको दरमा बढ्दै थिए कि कोही पनि सहर-शहरमा रहन सक्तैनन्। जब अति धेरै प्याक भयो र ट्राफिक गडबडी भयो, मानिसहरू नयाँ छरछिमेकमा सर्न थाले।
यी नयाँ छिमेकमा नयाँ स्कूलहरू, नयाँ घरहरू, थप जमिन र रूखहरू, र उत्कृष्ट छिमेकीहरू थिए - सफा हावा र चारैतिर घुम्नको लागि धेरै कोठाको उल्लेख नगर्न। तपाईं आफ्नो छिमेकीहरूसँग घनिष्ठ हुनुभयो… किनकि ती सबै समय भित्र र बाहिर सर्दैनन्… सामाजिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिएर बारमा कुरा गर्दै।
सामाजिक मिडियामा लागू गरियो, म विश्वास गर्दछु कि हामी पनि त्यस्तै देखिरहेका छौं। Digg को कोरले अहिले नै ब्ल्याट अनुभव गरिरहेको छ - यती लोकप्रिय भएको सेवा सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने प्रयोगकर्ताहरू विचलित हुँदै गइरहेका छन् र विकल्पहरूको खोजी गरिरहेका छन्। माइस्पेस संग, उत्तर फेसबुक थियो। अब फेसबुक माइस्पेस जत्तिकै ठूलो भएको छ र उही पठारहरू भइरहेको छ - यस पटक द्रुत गतिमा।
सबैजना कहाँ जाँदैछन्? मलाई लाग्छ कि उत्तर यो हमला हो माइक्रो नेटवर्क पपिंग गर्दै। मानिसहरू शहर शहर छोड्दै छन् र उपनगरहरूमा बाहिर सर्दै छन्।
बजारका लागि सन्देश
IMHO, यो बजारका लागि ठूलो खबर हो। व्यापक-आधारित विज्ञापन प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने जुन धेरै आँखाका खेलहरू (तर थोरै खरीददारहरू) कम लोकप्रिय भइरहेको छ। तपाइँ पुग्न चाहानु भएको को लागी मिल्छ कि मिल्दो सूक्ष्म साइटहरु खोज्दै। व्यक्तिगत रूपमा, म को लागी को लागी को लागी चलाउन को लागी को लागी साईटहरु को लागी विज्ञापन राजस्व मा अधिक माफी मागे छ नौसेना भेट्स.
यी सबै साइटहरूमा मार्केटि campaigns अभियानहरू लागू गर्न खर्च गरेको समयले केवल ओएलको लागतमा भिन्नता गर्न सक्दछ। ब्याच र ब्लास्ट प्रविधिहरू, यद्यपि। डायनामाइटको साथ माछा मार्न सजिलो थियो, तर इन्टरनेटमा एक हानिकारक चाल हो। यसको लागि बजारहरूले आफ्नो कार्यनीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्दछ, तिनीहरूलाई सही सन्देशमा कडा परिश्रम गर्न आवश्यक हुन्छ सही समयमा - साथै उत्कृष्ट प्रतिष्ठाको साथ ठूलो अनलाइन उपस्थिति निर्माण गर्न।
कसैले पनि भने कि यो सजिलो हुँदैछ!
टैग: ब्लाइटनौसेना भेडाहरूसामाजिक संजालसामाजिक संजाल
भिडियो> = छविहरू + कथाहरू
एक Yooba के हो?
सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा अप्रत्याशित व्यवसाय हो। MySpace वा FaceBook जस्ता धेरै वेबसाइटहरूले युवाहरूलाई लक्षित गर्छन् र हामी सबैलाई थाहा छ यस प्रकारका दर्शकहरूले उनीहरूको स्वाद साँच्चै छिटो परिवर्तन गर्न सक्छन्।
ग्लोब याद छ? पहिलो सामाजिक सञ्जाल - "डटकम बबल" जसले $200 मिलियन पुग्यो र 1 दिनमा सबै कुरा गुमाए।